အင်တာနက်ကို & ကွန်ယက် လမ်းညွှန်များ & ကျူတိုရီရယ်
by ဆူး Gonzalez
Hulu, Netflix, Vudu နှင့်ထို့ထက် ပို. အဘို့အနိမ့်ဆုံးမြန်နှုန်းလိုအပ်ချက်များ
နိမ့်ဆုံးအကြံပြုရှိတယ် အင်တာနက် မြန်နှုန်းကဲ့သို့သောကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများ, မှဗီဒီယို streaming များအတွက် Netflix , Hulu , Vudu, နဲ့ Amazon ။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ရှိနိုင်ပါစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပေမည် bandwidth ကို သူတို့ကအလွယ်တကူ High-def အကြောင်းအရာ stream နိုငျသောကွောငျ့, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေသတိထားရပါမည်။
ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသင်လိုချင်သောနောက်ဆုံးအရာက load ရှိသည်မဟုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီတိုင်းမိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုဖြစ်ပျက်လျှင်, သင်ကဲ့သို့ရုပ်ရှင် stream တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းအတွက်လုံလောက်သောဆက်သွယ်မှုရှိသည်မဟုတ်ပေလိမ့်မည်။
ချောမွေ့စံချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကဗီဒီယိုရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်များသောအားဖြင့်ထက်ပိုမို2Mb / s နဲ့သောကွန်နက်ရှင်ရှိသည်ဖို့အကြံပြုပါတယ်။ HD ကို, 3D, ဒါမှမဟုတ် 4K အဘို့, အဲဒီမြန်နှုန်းအများကြီးပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဒါဟာဗီဒီယိုများထွက် dishing ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးလည်းကွဲပြားခြားနားပါတယ်။
လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာစံချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကြည့်ရှု 1 Mb / s နဲ့။ သငျသညျ 1 Mb / s အမြန်နှုန်းမှာ Netflix နဲ့စီးဆင်းနိုင်ပါတယ်နေစဉ်, အရည်အသွေးဘယ်လောက်ဟောင်းကို VHS ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်လိုပဲကြီးမားတဲ့ screen ပေါ်မှာ grainy ဖွစျလိမျ့မညျ
စံချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကဗီဒီယို (ကြည့်ရှု2Mb / s နဲ့ 480p တစ် TV ပေါ်မှာ)
High-def ကဗီဒီယို (ကြည့်ရှု4Mb / s နဲ့ 720p, 1080p )
5 ကိုအကောင်းဆုံးအသံနှင့်ဗီဒီယိုအတွေ့အကြုံအတွက် Mb / s ကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို
15 Mb / s ကို 4K streaming များ (သို့သော် 25mb / s ကိုဦးစားပေးဖြစ်ပါသည်) ။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦး HEVC ဒီကုဒ်ဒါနှင့်အတူတစ်ဦး 4K Ultra တီဗီဖြစ်ပါတယ်အကြံပြု
Netflix ဟာကနေ streaming သောအခါ, ဝန်ဆောင်မှုကိုအလိုအလျောက်သင့်ရဲ့အင်တာနက်မြန်နှုန်း၎င်း၏အကဲဖြတ်ဗီဒီယို၏အရည်အသွေးချိန်ညှိပါလိမ့်မယ်။ Netflix နဲ့သင်တစ်ဦးနှေးကွေးမြန်နှုန်းရှိသည်ဆုံးဖြတ်သည်လျှင်, ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်တီဗွီရှိုး HD မှာရရှိနိုင်လျှင်ပင်သင်မြင့်မားသောအဓိပ်ပါယျရညျအသှေးကိုဗီဒီယိုစီးဆင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
1.0-2.3 စံချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဗီဒီယို Mb / s နဲ့
720p များအတွက် 2.3-4.5 Mb / s ကိုအပြည့်အမြင့်ဆုံးနှင့်အဓိပ္ပါယ် 1080p resolution နဲ့ဗီဒီယိုနှင့်မြင့်မားသောအဓိပ်ပါယျအသံက high-def ကဗီဒီယို 4.5-9 Mb / s နဲ့
9 Mb / s ကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုများအတွက် 3-D ကို HD movies တွေကို
ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူ streaming 4K 11 Mb / s ကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို Dolby Vision ၏ HDR
Vudu သင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယိုသင့်မီဒီယာ streamer ပေါ်မှာကစားပါလိမ့်မယ်စမ်းကြည့်ဖို့စမ်းသပ် run ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်ကစောင့်ကြည့်နေစဉ်ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုအကြိမ်ကြိမ်ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်ကြားခံလျှင်, မက်ဆေ့ခ်ျကိုသငျသညျ သာ. နိမ့်အရည်အသွေးကိုဗားရှင်းစီးဆင်းမယ်ဆိုရင်တောင်းဆိုနေတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
စံချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အကြောင်းအရာ stream မှ 1.5 Mb / s နဲ့
3 720p High-def ဗီဒီယိုများအတွက် Mb / s နဲ့
1080p HD ကိုအကြောင်းအရာ stream မှ / s နဲ့6Mb
13 4K Ultra HD ဗီဒီယိုများအတွက် Mb / s နဲ့
စံချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အကြောင်းအရာ stream မှ / s ကို 1 Mb
HD ကိုအကြောင်းအရာ (720p / 1080p) stream မှ 3.5 Mb / s နဲ့
15 4K Ultra HD ဗီဒီယိုများအတွက် Mb / s နဲ့
စံ defintion (480p) အကြောင်းအရာ stream မှ 2.5 Mb / s နဲ့
720p HD ကိုအကြောင်းအရာ stream မှ / s နဲ့6Mb
1080p HD ကိုအကြောင်းအရာ stream မှ / s နဲ့ 8 Mb
4K Ultra HD အကြောင်းအရာ stream မှ / s နဲ့ 25 Mb
720p HD ကိုအကြောင်းအရာ stream မှ 2.5 Mb / s နဲ့
1080p HD ကိုအကြောင်းအရာ stream မှ / s ကို4Mb
4K Ultra HD အကြောင်းအရာ stream မှ / s နဲ့ 15 Mb
ပင်2Mb / s ကိုမရောက်ရှိနိုင်သောအများအပြားကျေးလက်ဒေသလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရှိပါတယ်နေစဉ်, ပိုကြီးတဲ့မြို့ကြီးများ, ဆင်ခြေဖုံးများနှင့်မြို့ပြဒေသများတွင်ပိုမို 10 Mb / s ရရှိနိုင်ပါနှင့်အထက်အမြန်နှုန်းရှိသည်။
ဒါဟာဘရော့ဘန်း / cable ကိုအင်တာနက်ကန့်သတ်မထားပါ။ အချို့ကိစ္စများတွင်တစ်ဦး DSL အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကနေ 20 Mb / s ကိုရောကျခါနီးပွီအင်တာနက်အမြန်နှုန်းရရှိနိုင်ပေမည်။
တချို့ကပံ့ပိုးပေးကမ်းလှမ်းရန် DSL အမြန်နှုန်း အချို့ cable ကိုပံ့ပိုးပေး 30 / s ကို Mb သို့မဟုတ်မြင့်မားသောပူဇော်နေစဉ်, 24 Mb / s နှင့်အထက်၏။ Google Fiber 1 GB / s နဲ့ (တစ်စက္ကန့်တဦးတည်း Gigabit) အမြန်နှုန်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤရွေ့ကား Ultra-မြန်နှုန်းမြင့်ဆက်သွယ်မှုရုံယခုကြှနျုပျတို့မရရှိနိုင်ရှိသည်, ပိုပြီးမည်သည့်ဗီဒီယိုအကြောင်းကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
အခြားအ Gigabit န်ဆောင်မှုကော့ Gigablast AT & T က Fiber နှင့် Xfinity ပါဝင်သည်။
သငျသညျမွနျမွနျ၏တဦးတည်းကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့အင်တာနက်မြန်နှုန်းစစျဆေးနိုငျ သည်ဤအင်တာနက်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ ။ သို့သော်နှေးကွေးနေကွန်ယက်ပံ့ပိုးသည်အခြားအချက်များရှိပါသည်လျှင်, ဤစမ်းသပ်မှုများတိကျမှန်ကန်မဖြစ်အံ့သောငှါသတိပြုမိစေသတည်း။ အောက်ကလာမယ့်အပိုင်း၌ပိုမိုရှိပါတယ်။
Netflix နဲ့ပင်သင်သည်သင်၏ကွန်ယက်နှင့် Netflix ၏အမြန်နှုန်းစမ်းသပ်နိုင်တယ် Fast.com မှာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်သင် Netflix နဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစီးဆင်းတဲ့အခါသင်လုပ်နေပါလိမ့်မယ်တိကျစွာကားအဘယ်သို့သောသူတို့၏ဆာဗာများမှအကြောင်းအရာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းစမ်းသပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာသင် Netflix နဲ့စာရင်းသွင်းဖို့စီစဉ်နေလျှင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးစမ်းသပ်မှုပါပဲ။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အင်တာနက်မြန်နှုန်းသင်တို့အဘို့အပေးဆောင်နေအဘယ်အရာကိုမှာထွက် Caps မှန်ရဲ့နေစဉ်, အခြားအရာထိုကဲ့သို့သောသင်အသုံးပြုနေတဲ့ကိရိယာများအဖြစ်လွန်းသည်ဟုမြန်နှုန်းထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဟောင်း, ခဲ-အလုပ်လုပ်ရှိပါက Router က သို့မဟုတ် modem , ဒါမှမဟုတ် Laptop ကိုသို့မဟုတ်ဖုန်းကြောင့်အမှန်တကယ်သင်သည်သင်၏ထံမှပေးသောအနေအပေါငျးတို့သ bandwidth ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရန်ခက်ခဲမယ့် ISP က ။
သင်သည်သင်၏ laptop ကိုအွန်လိုင်းဗီဒီယိုများ streaming ကိစ္စများရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်ဥပမာ, သငျသညျရနျကွိုးစားနိုင်ပါတယ် ခွန်အားသင့်ကွန်ယက်ရဲ့ Wi-Fi signal ကိုမြှင့်တင်ရန် , ဒါမှမဟုတ် Wi-Fi ကနေ disconnect နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအသုံးပြုဖို့ Ethernet အစားကွန်နက်ရှင်။ ဒါဟာက Wi-Fi ကိုအချက်ပြအဆောက်အဦးထဲမှာအထူးသဖြင့်အရပ်ဌာန၌အားနည်းခြင်းသို့မဟုတ် device ကိုအခြားကြိုးမဲ့အချက်ပြမှုများအားဖြင့်အတူဝငျရောကျစှကျခံနေရကြောင်းတတ်နိုင်သမျှပါပဲ။
စဉ်းစားရန်အခြားအရာတစ်ခုခုကသင့်ကွန်ရက်က bandwidth ကိုသင့်ရဲ့ network ပေါ်မှာရှိသမျှသောအခြားကိရိယာများအကြားမျှဝေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ 8 Mb / s နဲ့အင်တာနက်အမြန်နှုန်းနှင့်အချို့သော desktop နှင့် laptop နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်း console ကိုနဲ့တူလေးကတခြား devices များရှိသည်ဟုဆိုသည်။ သူတို့အား devices များအသီးအသီးမှာတစ်ချိန်ကအင်တာနက်အသုံးပြုနေသည်ဆိုလျှင်, သူတို့တစ်ဦးစီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သာ Hulu ကနေ SD က content များအတွက်ခဲအလုံအလောက်ဖြစ်သော,2Mb / s ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
သူကပြောပါတယ်ခံနှင့်အတူ, သင်ဆဲနှင့်အတူဒုက္ခရှိခြင်းဆိုရင် ကြားခံနှင့်ဗီဒီယိုများကိုအပြည့်အဝ load မှလျစ်လျူရှုထား နှင့်သင့် Wi-Fi signal ကိုဒါမှမဟုတ် Ethernet ချိတ်ဆက် option ကိုတိုးမြှင့်သင့်ရဲ့အခြားထုတ်ကုန်များသုံးပြီးရပ်တန့်, ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါ - သင်ဖြစ်ကောင်းရုံအများကြီးမှချပြီးနေကြတယ် သင့်အိမ် network ပေါ်မှာဝယ်လိုအား။ အမှန်တကယ်ကမ္ဘာအသုံးအနှုန်းများထဲမှာထားရန်, သင်ကဗီဒီယို streaming များဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရှိခြင်းလျှင်, သင့် Laptop ကိုအပေါ်အမှုအရာဒေါင်းလုပ်ဖြစ်ဘူးနှငျ့သငျသင့် Xbox ကနေဗီဒီယိုတွေကိုစီးဆင်းနေချိန်တွင်သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ Facebook ပေါ်မှာရှိစေသတည်း။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းစွာထုတ်လုပ်ကိုင်ဖို့မသွားရဲ့။
ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်သငျသညျ TV နဲ့ရုပ်ရှင်ပရိုဂရမ်းမင်းကိုဝင်ရောက်နှင့်အိမ်ထောင်စု၏ကျန်ကိုလည်းတစ်ချိန်တည်းမှာအင်တာနက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အဓိကလမ်း, အနိမ့်အရည်အသွေး, နှေးကွေးနေတင်နှင့်ကြားခံနှင့်အတူနှောင့်အယှက်ပြဿနာများရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် သင်လက်လှမ်းချင်တဲ့န်ဆောင်မှုများအားလုံးအမြန်နှုန်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရေးအတွက်, သင်တတ်နိုင်ကြောင်းကိုသင်၏ဧရိယာထဲမှာရရှိနိုင်အမြန်ဆုံးအင်တာနက်မြန်နှုန်း secure ဖို့ဘဏ္ဍာရေးကတိကဝတ်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။
Windows XP မှာတစ်ဦးက Network Drive ကိုမြေပုံလုပ်နည်းနားလည်ခြင်း
Internet Explorer ကို Update လုပ်နည်း
တစ်ဦး 600 Mbps ထိကြိုးမဲ့မူလစာမျက်နှာ Router ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုနားလည်ခြင်း
Windows XP ကိုအတူတစ်ပရင်တာ Share လုပ်နည်း
သင့်ရဲ့ Router ပေါ် port forwarding ကိုဘယ်လို
တစ်ဦး Linksys ကွန်ယက် Set Up လုပ်နည်း
မိုက်ကရိုဆော့ဖကွန်ယက်များအတွက်လိုင်း Enable လုပ်နည်း
Netflix နဲ့ကွန်ယက်အမှား: အဘယျသို့ Check မှ
IE11 အတွက် cache ကိုရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
2018 ခုနှစ်တွင် Buy ဖို့7အကောင်းဆုံးဒီရေ Protector
ပန်ဒိုရာ Recovery ကို v2.2.1
Telnet - Linux ကိုစစ်ဌာနချုပ် - Unix စစ်ဌာနချုပ်
Android ပေါ်မှာ Skype ကိုအသုံးပြုခြင်း
PPPoE ကအင်တာနက် Access ကို Set Up လုပ်နည်း
HP က 2000t 15.6 လက်မ Laptop ကို PC မှာ
ရီးရဲလ်ကစားသမား 10 ဦးကိုသုံးပြီး CD များအနေဖြင့် Copy ကူးဂီတ
NAD + PP-3 ဒစ်ဂျစ်တယ် Phono Preamplifier (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း)
IOS ကိုမေးလ် (iPhone, iPad) တွင်တစ်ဦး Link ကိုကူးပါဖို့ကိုဘယ်လို
Viddy ဆိုတာဘာလဲ iPhone ကိုများအတွက် Viddy App ကို၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
APOP: သင်သည်အီးမေးလ် Term အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
Star Wars စစ်မြေပြင်ကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (XONE)
အဘယ်အရာကိုလွှမ်းခြုံသင့် Laptop ကိုအာမခံပေးတော်မူမည်လော
ငါဘယ်လိုအစာရှောင်ခြင်း shutter speed အတူတစ်ကင်မရာကိုရှာပါသလား?
ကွဲပြားခြားနားသောမိုဘိုင်းစနစ်များများအတွက် Creating Apps ကပ
နှောက်ယှက်ခြင်းရှောင်ကြဉ်ပါရန် Wi-Fi ကို Channel ကိုနံပါတ်ပြောင်းနည်း
သူများသည် DJs အမြဲတမ်း Talk ကိုညာ Up ကိုလအဆိုပါဆိုသံစေရန်မည်သို့ပါသလား
အိုင်ပီအားနည်းချက်များကျော် Voice ကို